“အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုချဉ်းကပ်ခြင်း” (Approaching the English Language) - Myanmar Network
.pdf, 129 KB
Permalink Reply by Su Nanda Kyi on October 8, 2012 at 13:40
Permalink Reply by Tina on October 8, 2012 at 16:14
Permalink Reply by DawnyiT on October 8, 2012 at 18:30
Permalink Reply by Mg Moe on October 8, 2012 at 23:33
Permalink Reply by Ma Pyayt Phyo on October 11, 2012 at 10:21
Permalink Reply by 18cbsdmi28f7e on October 11, 2012 at 13:39
Permalink Reply by Zagawar Phyu on October 12, 2012 at 15:48
Permalink Reply by Htet Kaung San on October 13, 2012 at 15:06
Permalink Reply by khinthidasoe on October 14, 2012 at 9:18
I always respect to saya U Mya Kyaing .
Permalink Reply by khinthidasoe on October 14, 2012 at 9:23
Permalink Reply by Shwe Sin on October 14, 2012 at 14:21
thaz. i think it's important
Permalink Reply by Thet Htar Aung on October 15, 2012 at 22:26
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ‘Writing bases on speaking’ ဆိုတာကို ယခု အခြေခံပညာကျောင်းများမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပြသပေးနေသော ဆရာ၊ဆရာမများ အသေအချာနားလည် သဘောပေါက်ပြီး တပည့်များကို အခြေခံပညာ အဆင့်ကတည်းက speaking practice လုပ်ပေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းမည်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ ဆရာတင်ပြထားသလို အင်္ဂလိပ်စာကို foreign language အဖြစ်သာ လေ့လာသင်ယူ ခဲ့ရသောကြောင့် အခုမှစကာ ကလေးစကားသင်သလိုပြန်သင်ဖို့ကြိုးစားရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာများကို ဆက်လက်သင်ပြပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။ လေးစားလျှက်..................